कोरोनाको त्रासका बीच स्वास्थ्यमन्त्रीको आपत्तिजनक अभिव्यक्ति, भगवान भरोसामा जनता !
‘कोभिड– १९’ नाम दिइएको कोरोना भाइरसका कारण यतिबेला विश्व आक्रान्त बनिरहेको छ । १ सय १५ देशमा फैलिसकेको संक्रमणका कारण विश्वभर त्रास छ ।
मानिसहरू आवत–जावत गर्न छाडेपछि, कतिपय अवस्थामा रोक लगाइएपछि अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू धमाधम रद्द हुँदैछन् ।
सरकार र राष्ट्रप्रमुखका भ्रमणहरू स्थगित भएका छन् । औपचारिक कार्यक्रमहरू रद्द भएका छन् । कोरोनाले विश्वमा आर्थिक मन्दीको अवस्था सिर्जना हुने लक्षण देखा परिसकेको छ ।
कोरोनाको उत्पत्तिस्थल मानिएको चीनको वुहानमा यसको संक्रमण क्रमशः घट्दै गइरहेको छ, तर युरोपसहित बाँकी विश्वमा फैलिने क्रममा छ ।
संक्रमितको संख्या झण्डै १ लाख १५ हजार पुग्दा मृतकको संख्या ४ हजार नाघिसकेको छ । मंगलवार मात्र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले वुहानको अस्पताल निरीक्षण गरेका छन् ।
कोरोनाको संक्रमण फैलिएपछि चीनले एक सातामा हजार शय्याको अस्पताल निर्माण गर्‍यो, यो बाँकी विश्वका लागि उदाहरणीय काम थियो ।
रातारात करोडौं मास्क तयार गर्‍यो, शतर्कता अपनायो र क्षति न्यूनीकरण गर्‍यो । कोरोनाविरुद्ध सरकारले लिएको सावधानीका कारण चीनका अन्य शहरमा यसको संक्रमण त्यो ढंगले फैलिन पाएन ।
कोरोनाले आक्रान्त बनेको वुहानपनि क्रमशः सामान्य अवस्थातर्फ फर्किंदै छ । तर चिन्ता चीनबाट बाह्य विश्वमा फैलिएको छ ।
चीनको संक्रमण क्रमशः कम हुँदै गएपनि इरानदेखि इटलीसम्म यसको प्रभाव चिन्ताजनकरूपमा फैलिएको छ ।
अहिले नयाँ संक्रमण देखिनेमा इटाली सबैभन्दा अघि छ । इरान र दक्षिण कोरियामा पनि अवस्था नियन्त्रणमा आइसकेको छैन ।
स्थिति नियन्त्रणबाहिर गएपछि इटालीले देश पूरै लकडाउन गरेको छ । ६ करोडभन्दा बढी नागरिक घरभित्रै थुनिएका छन् । क्वारेन्टाइनबाट भाग्नेलाई ३ महिना जेल सजाय गर्ने चेतावनी सरकारले दिएको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपाल पनि कोरोनाको उच्च जोखिममा रहेको उल्लेख गरिसकेको छ । कोरोनाको संक्रमणसँग जुध्ने पूर्वतयारीका लागि भन्दै संसद्‍मा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथि छलफल भयो, तर सरकारले कोरोना संक्रमणबाट हुनसक्ने क्षति कम गर्न पर्याप्त सावधानी अपनाएको छैन ।
यतिमात्र होइन विभागीय मन्त्रीले नै कोरोना संक्रमणको आशंका गरिएका कसैलाई पनि क्वारेन्टाइनमा राख्न सकिँदैन भन्ने अभिव्यक्ति दिएर आफ्नो निकम्मापन प्रदर्शन गरेका छन् । विपद्का बेला सरकारले खुट्टा लुलो पारेर जनतालाई आहत दिएको छ ।
रुखो स्वभावका मन्त्रीको आपत्तिजनक अभिव्यक्ति !
राष्ट्रिय युवासंघ नेपालको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै मंगलवार मन्त्रालयमा स्वास्थ्य मन्त्री ढकालले भने– चीनबाट ल्याइएकालाई जस्तो व्यवस्था गर्न सरकारले सक्दैन, सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्नुस् ।
के भनेका थिए मन्त्री ढकालले ?
"क्यारेन्टाइन भन्नेबित्तिकै मान्छेहरूले हिजो चीनबाट विद्यार्थी ल्याएजस्तै सरकारले गएर ल्याइदिने, सबै सरकारकै व्यवस्थापनमा बस्ने भन्ने कुरा नगरौं, अब सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ । डब्लूएचओको एउटा मापदण्ड छ, त्यो मापदण्डभित्र बस्नुपर्‍यो । दिनैपिच्छे ज्वरो आको छ, छैन त्यो नाप्न त सकिहाल्छ । त्यसमा दूरी कति मेन्टेन गर्ने, के खाने, परिवारका सदस्यहरूसँग कस्तो विहेभ गर्ने, के गर्ने, के नगर्ने त्यो एउटा प्रोटोकल हामीले तयार गरेका छौं, त्यसको आधारमा उहाँहरू बस्नुपर्छ । अब ज्वरो आयो, रुघाखोकी भो, त्यस्तो हो भने हामी अस्पतालमा परीक्षण गराउने व्यवस्था गर्छौं । परीक्षण गराउँदा पोजेटिभ रिजल्ट देखियो, अस्पतालमै राखेर उपचार गराउनुपर्‍यो भने त्यसको जिम्माचाहिँ राज्यले लिने र राज्यले गर्छ । यो क्वारेन्टाइनमा बस्ने कुराका लागि चाहिँ हामीले पहिलेभन्दा प्रोटोकल चेन्ज गरेका छौं ।"
मन्त्रीको यो बोली नै नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा हो भने यो आपत्तिजनक विषय हो । अन्यथा यस्तो गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिने मन्त्रीमाथि प्रधानमन्त्रीले एक्सन लिनुपर्छ । जनस्वास्थ्यमा यो हदसम्मको खेलबाड गर्न किमार्थ मिल्दैन ।
चरम घमण्डी स्वभावका मन्त्री ढकालको यो भनाइले कोरोनाको सन्त्रासमा रहेका नागरिकलाई थप आहत बनाएको छ ।
मन्त्रीको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिप्रति सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश व्यक्त भइरहेको छ– ‘जनताको करमा रजाइँ गरिरहेकाको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति’ भनेर ।
मन्त्रीको भनाइलाई अनुशरण गरेर बिरामीहरू अब घरमै बस्नुपर्ने भयो । कोरोना पुष्टि हुने बेलासम्म अरू कति जनामा फैलिने हो, त्यसको लेखाजोखा कसले गर्ने ?
गतसाता संसद्‍मा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनै मन्त्री ढकालले भनेका थिए– ‘कोरोना भाइसर कस्तो भन्दा एक डाक्टरले भन्नुहुन्थ्यो– नपड्किएको एम्बुसजस्तो ! तपाईं हाम्रो परिवारमै छ कि, छिमेकमा छ कि, कहाँ आइपुग्यो भन्ने कुनै अनुमान नभएको, पड्किँदा बल्ल थाहा हुने ।’
मन्त्री ढकालको मंगलवारको अभिव्यक्तिले त्यो एम्बुस विस्फोट हुने अवस्थाको भयावहलाई नजरअन्दाज गरेको छ ।
कोरोना संक्रमणको आशंका भएकाहरू अब अस्पताल नगएर घरमै बस्ने हो भने जुनसुकै बेला विस्फोट हुने खतरा झन् बढेको छ ।
मन्त्रीको आजको अभिव्यक्ति त्यतिबेला बेला आएको भए स्वभाविक हुन्थ्यो, जतिबेला इरान वा इटालीको जस्तो अवस्थामा देश हुन्थ्यो, त्यतिबेला नागरिकले सहर्ष स्वीकार्थे पनि ।
नेपालको अहिलेको अवस्था फरक हो । कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका एक मात्र व्यक्ति निको भइसकेको भनिएको छ, अन्यमा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको छैन ।
जनता कोरोनाको त्रासमा छन् । संक्रमणभन्दा मानसिक चिन्ताले खाइरहेको अवस्था छ । गर्न नसक्ने नै हो भनेपनि यतिबेला त मन्त्रीले भन्नुपर्थ्यो, ‘सरकार चाहिने यस्तै बेलामा हो । हामीले पूर्वतयारी गरिरहेका छौं । तपाईंहरू पनि सचेत हुनुस्, अप्ठ्यारो अवस्थामा सरकार छ ।’
अहिले जनताले खोजेको सरकारप्रतिको भरोशा हो, आत्मविश्वास हो । अप्ठ्यारो पर्दा सरकार छ है भन्ने विश्वास हो ।
सरकारले नसकेको दिन जनता आफैं तयार हुन्थे । स्वतस्फूर्तरूपमा सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्थे पनि, जसरी अहिले इटालीको सिंगो जनसंख्या क्वारेन्टाइनमा छ ।
आजको दिनमा मन्त्रीको यो अभिव्यक्ति निकम्मापनको पराकाष्टा बाहेक अरू केही हुन सक्दैन । यसले त संक्रमितहरू पनि सरकारले केही गर्दैन भनेर अस्पताल नजाने खतरा बढेको छ ।
निकम्मा सरकार, भगवान भरोसामा जनताको जीवन !
मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अस्पतालमा छन् । प्रधानमन्त्रीले कार्यबाहक नतोकेका कारण प्रधानमन्त्रीसँगै सिंगो देश बिरामी परेजस्तो देखिएको छ ।
विश्व कोरोनाले त्रस्त भइरहेको समयमा नेपालमा त्यससँग जुध्ने पूर्वतयारी निकै फितलो छ । कर्ममाण्डी र लापरवाहीपूर्ण सरकारको कार्यशैलीले कोरोनासँग सामना गर्ने ल्याकत राख्दैन ।
अहिलेसम्म कोरोनाको संक्रमण नफैलिनु नेपालका लागि सौभाग्य हो, अझै धेरै नागरिकले विश्वास गरेजस्तै ‘पशुपतिनाथको कृपा’ ।
औपचारिक रूपमा पुष्टि नभएपनि खुला सीमा र विमानस्थलको फितलो चेकजाँचका कारण नेपालमा पनि संक्रमित आएका हुनसक्ने भन्दै आमनागरिक त्रसित छन् ।
अस्पतालमा पुगेका बिरामी फरार हुने घटनाले उनीहरूले संक्रमण बाहिर फैलाएको आशंका आमजनताले गरिरहेका छन् ।
अर्कातर्फ कोरोनाको त्रासका कारण बजारमा कृत्रिम अभाव र कालोबजारी भइरहेको छ । सरकारप्रतिको भरोसा नभएका कारण जनताले खाद्यान्न तथा अत्यावश्यकीय सामग्री अतिरिक्त भण्डारण गर्न थालेका छन् ।
नाकाबन्दीको समयको झल्को दिनेगरी एलपी ग्यासका रित्ता सिलिण्डर लाइनमा देखिन थालेका छन् । सरकारले जनतालाई आश्वस्त तुल्याउन सकिरहेको छैन ।
मंगलवारको अभिव्यक्तिसँगै समाजिक सञ्जालमा त मन्त्री ढकालको राजीनामा माग्न शुरू भइसकेको छ, नेपालका मन्त्रीबाट त्यो स्तरको नैतिकताको अपेक्षा नगरौं ।
अहिलेलाई यति मात्र भनौं, जनताको स्वास्थ्यबारे यति हल्काफुल्का टिप्पणी गर्ने मन्त्रीलाई त्यो पद ओगटी राख्ने नैतिक अधिकार छैन ।